Adoolessa 17, 2018
Prezidaant Doonaald Traamp Moscown kan ittiin qeeqamaa jirtu filannoo prezidaantummaa US kan bara 2016 jidduu seenuu haalutus hoogganaa Raashiyaa Vladimir Putiin waliin Helsinkii keessatte ennaa wal argan wal ga’ii gaarii qabaachuu isaanii dubbatanii deggersa qaban mul’isan.
Wal ga’iin NATO waliin geggeessan gaarii ta’uu fi maallaqi guddaan walitti qabamuu dubbatanii Vladimir Putin waliin marii kana dura gaarii ta’e geggeesseen jira jechuu dhaan Trump ergaa Twitter maxxansaniin beeksisaniiru.
Afaan yaa’ii nmana maree Paul Ryan fi waahiloonni isaanii siyaasaa kanneen biroon garuu Tramp ejjennoo isaan Putin deggeruuf qaban balaaleffachuu itti fufaniiru. Rayaan akka jedhanitti Raashiyaan filannoo keenya jidduu seenuun ifaa ta’uu isaa beeksisamuu qaba jedhan. Republikaanonnii fi Demokraatonni hedduun ejjennoo isaanii kana balaaleffachuu dhaan kan nama qaanessu jedhan.